Nhau - Nekufambira mberi kwenguva uye kusimudzira kwesainzi uye tekinoroji ……
Nekufambira mberi kwenguva uye kuvandudzwa kwesainzi uye tekinoroji, zvinodiwa nevanhu zvemibhedha zvakatangawo kuchinja, kubva pamabhedhi echinyakare echinyakare kuenda kumabhokisi-echirimo mabhedha uye smart mibhedha.
Mubhedha wakangwara mubhedha unoshandisa mubatanidzwa wemabhodhi akawanda emubhedha kugadzirisa kukwirira kwemusoro netsoka dzemubhedha pakuda kuti zvienderane nerwakakombama muviri wako kusvika padanho guru uye nekuunza chiitiko chekurara.
Mubhedha wakangwara mhando yemubhedha une hungwaru mabasa. Iyo mhando yemubhedha wemagetsi. Iwo mubhedha wemagetsi unoshandisa hombe data uye sensor kudzora kupindira, asi mubhedha wemagetsi hausi iwo mubhedha wakangwara. Panguva imwecheteyo, mibhedha yakangwara zvakare zvigadzirwa zvinoteedzera zvinoitika dzimba dzakanaka.
Rudzii rwemubhedha mubhedha wakangwara? Kuonekwa kweanonzi akangwara mubhedha wakafanana neyakajairika mubhedha, asi mukati memubhedha wakasiyana. Kana munhu akarara pamubhedha, remote control board inosunganidzwa, uye metiresi iri pasi pemusana nemakumbo inokwira zvishoma nezvishoma. , Matiresi inokwana zvine mutsindo nemukati wemunhu curve, uye hapana kunzwa kwekurasikirwa muchiuno. Kune zvakare ma modhi akati wandei ekuti smart bed kusarudza kubva. Iwe unogona kushandisa iyo TV modhi yekutarisa TV, iyo PC modhi yemakomputa, uye zero-kusagadzikana maitiro kana iwe ukarara. Iyo zero-yekumanikidza nzira ndeyekusimudza makumbo kuti aite imwe kona, kuitira kuti mutoro uri pamoyo ugone kudzikiswa panguva yekurara.
Mubhedha wakangwara unogadzirirwa nebasa rekudengenyeka uye metiresi yekurangarira furo, ine simba rakasimba uye inogona kuenderana nemidziyo yemuviri, kuitira kuti curve yega yemuviri ive nerutsigiro rwakakodzera.
1: Kungwara kwekutarisa kurara panguva yese iyi, yambiro yekutanga yehutano mamiriro
Mubhedha wakangwara unogadzirirwa ine simba isiri-yekubata mechina sensor, iyo inogona kuongorora kurova kwemoyo uye nehungwaru chaiyo-nguva yekutarisa, kuitira kuti vashandisi vanyatsoziva iyo yekurara kwezuva nezuva mhando uye data rehutano rehutano.
2: Njere yekucherechedza yeku ngonono, otomatiki kudzivirira kupindira
Kuchengeta hakusi kwakakomba chete, asi zvakare kunokanganisa hunhu hwekurara hwemumwe wako. Chero bedzi iko kusevha kwemushandisi kuchionekwa, mubhedha wakangwara unozosimudza iwo kona yekuseri, uchibvumira mushandisi kufema zvakanyatsonaka, nokudaro achizadzisa mhedzisiro yekumisa ngonono. Mushure mekukosora kwamira, zvinobva zvango dzokera pachinzvimbo chepakutanga. Maitiro ese anoshanduka zvinyoro nyoro uye haatapure mushandisi uye nehope dzemumwe.
3: APP musangano kumutsa-up basa, rega iwe uvate "zvakasununguka kumuka"
Kamwe kamwe kumuka neawa remaawa mangwanani kunogona kukonzera kusagadzikana sekurova moyo, kushushikana, kunzwa kusamuka, nezvimwewo. Zuva risingafadzi rinotanga kubva pane izvi, uyezve ndezvipi, zvinogona zvakare kukonzera matambudziko akakomba ehutano senge arrhythmia. Iyo chaiyo alarm alarm yemubhedha wakangwara inogona kuona kufema uye kumutsa mushandisi panguva chaiyo apo mushandisi ari muhope hope, izvo zvinonzwa zvirinani pane kumuka kwechisikigo.
4: S inoyevedza munyonga kuona hwomutambarara hope ergonomic dhizaini
Mubhedha wakangwara unosimudza mashanu emuviri akapatsanurwa majoini akabatana pamubhedha wemubhedha zvinoenderana neshoko re ergonomics. Kuburikidza neremote control, iyo angle yemubhedha furemu inogona kugadziridzwa pamadiro, chimiro chemuviri chinogona kugadziridzwa, uye kumanikidza kwemutsipa kunogona kuderedzwa.
5: Inovandudza nharaunda zvine hunyanzvi zvigadzirwa, zero giravhiti inoyerera chiitiko
Mubhedha wakangwara unoshandisa ndangariro furo, iri pakati nepakati yakaoma uye yakapfava, iyo inopa rutsigiro nekunyaradza kumuviri uye inounza zero-giravhiti yekurara chiitiko.
Nhumbi dzakangwara indasitiri yakatorwa kubva kuimba yakangwara. Nekuwedzera kusimudzira uye kukurudzira kweiyo smart home musika, maitiro evatengi anozoita zvishoma nezvishoma. Hazvina kumboonekwa kuti mukana wekushandisa weiyo smart fenicha musika unosungirwa kuve wakakura, uye indasitiri ine ramangwana rakajeka.